6 uhlaziyo olunamagama amakhulu lokuhlela ngoMeyi. | Uncwadi lwangoku
Meyi. Intwasahlobo epheleleyo. Ufuna ukuphuma kwimozulu elungileyo kwaye ufumane ikona elungileyo nayo ukuba uyifunde. Kwaye enye inyanga apho iindaba ezininzi zokuhlela. Ezi 6 ekhethwe ngokukodwa kuhlobo olumnyama. Entsha UVictor woMthi, imbali kwindlela USlav Galán okanye utitshala waseNtaliyane UCamilleri bahamba phakathi kweziphakamiso.
1 Ukoyisa Melika waxelela abagxeki - uJuan Eslava Galán
2 Ngaphambi kweminyaka embi - Victor del Arbol
3 Ixhoba lesihlanu-JD Barker
4 I-Tolkien kunye neMfazwe eNkulu-Imvelaphi yoMhlaba ophakathi-uJohn Garth
5 Ukuba lo ngumfazi-uLornzo Silva noNoemí Trujillo
6 I-opera yeVigàta- uAndrea Camilleri
Uloyiso lwaseMelika luxelelwe abantu abathandabuzayo -UJuan Eslava Galán
U-Eslava Galán usizisela a ukuhanjiswa okutsha Iincwadi zakhe ezonwabisayo zembali ezixeliweyo kwisitayile sakhe esiqhelekileyo esizuze abafundi abancinci abathembekileyo. Ngeli xesha kusisa kwi Ukunqoba iMelika Kwaye usixelele ubomi obonwabisayo babalinganiswa ngubani obenenkwenkwezi kuyo. Kwaye rhoqo "kubagxeki."
Ngaphambi kweminyaka embi - UVictor woMthi
UVictor woMthi urhuqa amawaka abalandeli abangenamiqathango sele ixesha elide. Ngomkhondo omangalisayo kunye Uhlobo lomntu olungenakuthelekiswa nanto, yenziwe ngodumo olufanelekileyo. Ngoku buya neli bali litsha.
Kuyo uyasixelela Ubomi bukaIsaya, Oqale ngaphezulu komhla awafika ngawo e-Barcelona njengomntwana kwaye washiya eyadlulayo. Uhlala neqabane lakhe kwaye uzama ukugqobhoza nge Ishishini lokubuyisela iibhayisekile. Kodwa yonke into iyatshintsha xa usamkela ndwendwela kumntu omdala endandiqhelene naye. Oku kucebisa ukuba ubuyele Uganda kwaye bathathe inxaxheba kwintlanganiso yoxolelwaniso lwembali yelizwe. Kwaye elidlulileyo uIsaya awayecinga ukuba ulibele liyakubuya.
Ixhoba lesihlanu -U-JD Barker
UJD Barker ubuya ne enye indlela eya Inkawu yesine, Esinye isihloko esaziwayo senoveli yolwaphulo-mthetho yamva nje. Thatha abalinganiswa kwincwadi yokuqala, Porter kunye neqela lakhe, apho i-FBI isusileyo kwityala lika-Anson Bishop abaliphandayo. Kodwa kungekudala bajongana nezinye ukubulala okutsha ngokulandelelana, ngeli xesha labafazi. Nangona kunjalo, uPorter ulandela Umkhondo we-anson ngokufihlakeleyo kwaye xa abaphathi bakhe befumanisa, bayammisa. Nangona kunjalo, uPorter uya kumlandela phantsi kunina.
I-Tolkien kunye neMfazwe eNkulu-Imvelaphi yoMhlaba ophakathi -UJohn Garth
Umbhali wale ncwadi uyasixelela nefuthe njani Umsebenzi kaTolkien wakhe amava okulwa kwiMfazwe yeHlabathi yokuQala xa kwakusenziwa kwaye kwakhiwa, umzekelo, uMhlaba oPhakathi. UTolkien oselula uthathe inxaxheba idabi le-somme, apho waphulukana khona phantse nabahlobo bakhe abasenyongweni. Kwaye uGarth usebenzisa i iileta ezingapapashwanga I-Tolkien kunye nabahlobo ukuba baphinde baphile kwindalo yonke.
Ukuba lo ngumfazi -Lorenzo Silva kunye noNoemí Trujillo
ukuba ukuphela kukaMeyi i uthotho lwamapolisa olutsha eqala uLorenzo Silva kunye noNoemí Trujillo. Kwaye ngokuhambelana nento eye yaba yifashoni kuhlobo, iinkwenkwezi umfazi.
Imalunga nomhloli wokubulala UManuela Mauri, ebephumile iinyanga ezisixhenxe xa efumana utyelelo kwiGosa uGuadalupe Larbi ukumcela ukuba abuyele emsebenzini. Mauri ngu eyahlukileyo ngegunya namandla Kuyimfuneko ukwenza i uphando olunzima ukuba iBrigade yePhondo yamaPolisa eziMthetho eMadrid ibanjiwe.
Zifunyenwe iintsalela zomntu kwiindawo ezimbini zokulahla inkunkuma ePinto naseValdemingómez, kodwa hayi isidumbu sonke kwaye akukho nto inika ubungqina ngokubhalwa kolwaphulo-mthetho. Kodwa kuye kwaneenyanga ezintathu kwaye snangoku ungalichazanga ixhoba.
I-opera kaVigàta - UAndrea Camilleri
Ibuyisa i Umphathi wenoveli wase-Itali kunye nomdali womgcini omkhulu UMontalbano nge yendabuko tragicomedy iseti kwiSicily ye kwinkulungwane XIX.
Ibali lenzeka ngobusuku buka 1875 nini ivula kwisixeko saseSicilian IVigàta entsha UKumkani wase-Italiyetha yeqonga. Izakubonisa Mediocre kunye ne-opera engaziwayo Umphathi wesixeko, UEugenio Bortuzzi, ikwazile ukwenza inkqubo ngaphandle kwenkcaso yabo bonke abahlali. Intlekele iqala xa soprano uyakhala kwaye wonke umntu uyoyika. Ukusuka apho i Amayelenqe, ukubulala kunye noqhushululu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » 6 uhlaziyo olunamagama amakhulu lokuhlela ngoMeyi